Somaliland oo Amarro ku rogtay Mudanayaasha guuleystay. | Banaadir Times
HomeWararSomaliland oo Amarro ku rogtay Mudanayaasha guuleystay.
Somaliland oo Amarro ku rogtay Mudanayaasha guuleystay.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaland Maxamed Kaahin Axmed ayaa marka hire u mahad celiyay ,Guddiga doorashooyinka, Musharixiinta, Golaha Wakiilada iyo degaanka iyo Xukuumadda oo uu sheegay inay waqti badan ku bixisay qabsoomida doorashoiyinka.
Wasiirka oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Hargeysa ayaa sheegay in dhamaan natiijooyinka doorashadii ka dhacay Gobolada iyo degaannada Somaliland lagu dhawaaqay, balse kaliya ay jarsan tahay natiijada doorashadii ka dhacday Magaalada Hargeysa.
Sidoo kale Mudanayaasha ku guuleystay Golayaasha Wakiilada iyo degaanka ayaa waxaa uu uga digay waxyaabo abuuri karo rabshada iyo amni darro oo ay kamid yihiin.
Ugu dambeyn Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaland Maxamed Kaahin Axmed ayaa faray laamaha Amniga inay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo isku dayda inay sameeyso waxyaabo lidi ku ah amniga degaannada Somaliland.